Ny mistery an'ny Mona Lisa nataon'i Leonardo da Vinci | Famoronana an-tserasera
Ny mistery an'ny Mona Lisa nataon'i Leonardo da Vinci
The Mona Lisa nataon'i Leonardo da Vinci
Raha misy sary hosodoko eo amin'ny tantaran'ny zavakanto izay nanaitra ny zava-miafina sy ny fiokoana nandritra ny taona maro, dia tsy isalasalana fa i La Gioconda na i La Mona Lisa. nolokoin'i Leonardo da Vinci, mpanao hosodoko kanto (1452-1519). Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i da Vinci ianao dia manasa anao hamaky ity lahatsoratra teo aloha ity.
La Gioconda, nolokoina tamin'ny menaka tamin'ny takelaka poplar mirefy 77 x 53 centimetatra eo anelanelan'ny 1503 sy 1519, dia aseho ao amin'ny Louvre Museum any Paris, izay anaovana filaharana lava hidirana, toy ny Izy io dia heverina ho iray amin'ireo sary hosodoko malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Andao jerena ny fahalianana momba ity sary mahaliana ity.
1 Ny maha izy azy ilay vehivavy
2 Fa maninona i La Gioconda no tena zava-dehibe amin'ny fomba fijery kanto
3 Ny sarin'ny sary
4 Ny endriny manaitra
5 I Italia sy i Frantsa no niadian-kevitra tamin'izany
Ny maha izy azy ilay vehivavy
Ny anarany, Gioconda, dia midika hoe "ilay mifaly" amin'ny Espaniôla. Ny anarany hafa, Mona, dia "ma'am" amin'ny teny italianina taloha, ka i Mona Lisa dia "ma'am Lisa." Ny fomban-drazana eken'ny besinimaro momba ny mombamomba ny vehivavy dia izany Momba ny vadin'i Francesco Bartolomeo de Giocondo, antsoina hoe Lisa Gherardini (Mitafy voaly amin'ny lohany izy, toetra mampiavaka ny vady). Saingy zavatra tsy voaporofo izy io. Voalaza ihany koa fa mpifanila vodirindrina amin'i Leonardo bevohoka izy, noho ny toeran'ny tanany teo amin'ny kibony.
Fa maninona i La Gioconda no tena zava-dehibe amin'ny fomba fijery kanto
Ao amin'ity sary hosodoko Leonardo ity maka tanteraka teknika vaovao nanamarika ny taloha sy aorian'ny tantara: ny sfumato. Na dia amin'izao fotoana izao dia tsy ankasitrahana tsara ny fandehan'ny fotoana, ny sfumato manome ny endriny tsy marim-pototra ireo tarehimarika, manome azy ireo ny halalin'izy ireo sy ny halavirana. Karazana "setroka" izay mahatonga ny tarehimarika tsy hifantoka tanteraka, manasongadina ny fiovan'ny fivezivezena, satria tsy mijanona ny olona. Manasongadina ny fampiasana matanjaka koa izy io sfumato ao anaty boaty Saint John Baptist na in Ny Virjin'ny Rock.
Ny sarin'ny sary
Aiza ny tontolo ao ambadiky ny vehivavy miafina? Misy ihany koa ny hypothèse maromaro momba an'io. Ny fanadihadiana farany natao dia nanambara fa mety ho ny tanànan'i Bobbio, ao amin'ny faritra Emilia - Romagna, izay hita amin'ny alàlan'ny karazana galerià, satria ny ampahany amin'ny tsanganana roa dia hita amin'ny lafiny roa amin'ny tontolo. Nisy zavatra nahasarika ny sain'ny mpikaroka ihany koa fa ny lafiny roa amin'ny tontolo dia toa tsy mitovy toradroa, ny havia dia ambany kokoa noho ny ankavanana (ny rano ao amin'ny faritra dia tokony hifindra amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny hafa ary tsy hijanona ho static). Izany dia miteraka ny vokany optika manaraka: raha mijery ny ilany ankavia isika dia mahita ny vehivavy mijoroa kokoa noho ny mijery ny tsara, amin'ny fomba izay rehefa mijery avy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa, ny endrika hita amin'ny tavanao toa tsy mitovy. Izany ve no mahaliana ny olona rehetra ny tarehiny?
Ny endriny manaitra
Tsy misy mahalala anio izay tsapan'ny Mona Lisa rehefa naseho azy, satria ny tsikiny sy ny endriny dia manaitra ny rehetra. Araka an'i Vasari, mpanakanto italiana nifanindry tamin'i Leonardo: Nandritra ny nandaharako azy dia nanana olona nihira na nilalao izy ary buffoons izay nahafaly azy, mba hiezahana hisoroka ilay alahelo izay matetika mitranga amin'ny sary hosodoko.
Amin'izao fotoana izao, ny fikarohana dia atao amin'ny alàlan'ny fitaovana teknolojia izay manandrana mamaky ny tsikiny feno hafanam-po, miorina amin'ny firaketana ny endrika ivelany
I Italia sy i Frantsa no niadian-kevitra tamin'izany
«Paris 2017 50 nataon'i Jan Willem Broekema» nataon'i Jan Willem Broekema dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Na dia maty tany Frantsa aza i Leonardo, dia nilaza ny Italiana fa teraka tany Italia izy, ka noho izany dia tokony ho eo ny Mona Lisa. Ny fifanolanana lehibe nandritra ny tantara dia nahatonga ny sary hoso-doko ho malaza kokoa. Nisy fandrobana aza tamin'ny 1911, nataon'ny mpiasa italiana teo aloha tao amin'ny tranombakoka Louvre, Vincenzo Peruggia, mba haverina any Italia.
Ary aminao, inona no tena mahavariana anao momba ny La Gioconda?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mistery an'ny Mona Lisa nataon'i Leonardo da Vinci
Fampiharana famolavolana Adobe tokony ho fantatrao